ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများတွင်လူကိုသေစေနိုင်လောက်သောရောဂါများပါနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများတွင်လူကိုသေစေနိုင်လောက်သောရောဂါများပါနိုင်
Posted by petitelapine on Aug 19, 2010 in News |4comments
ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများတွင်လူကိုသေစေနိုင်လောက်သောရောဂါများဖြစ်သည်.တီဘီရောဂါကဲ.သို.ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင်သည်ကိုတွေ.ရှိရကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှစူးစမ်းရှာဖွေလေ.လာသူသုတေသီပညာရှင်များကတွေ.ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်.သတင်းလေးတစ်ခုပြန်တင်ပြချင်ပါတယ်….
ဒီအကြောင်းကို ဖတ်ရတော့ ငွေကိုင်လိုက် အသုတ်သုတ်လိုက်နဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ မြန်မာပြည်က ဈေးသည်တွေကို သတိရမိတယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတော်တော်များများကလည်း
ရောဂါပီးနေကြပြီထင်တယ်။ ဒီငွေစက္ကူအစုတ်တွေကလဲ မကိုင်ချင်လို့ကို မရဘူး ဖြစ်နေတာ။ အခုဆို ၂၀၀ တန်တွေတောင် အစုတ်တွေ များလာပြီတဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း???